Viber ကို - အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & မက်ဆေ့ခ်ျများ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » Viber ကို - အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & မက်ဆေ့ခ်ျများ
Viber ကို - အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & မက်ဆေ့ခ်ျများ APK ကို
Viber ကိုသင့်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (Wi-Fi သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဒေတာအစီအစဉ် *) မှတဆင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသူမဆိုရန်သင့်အားချိတ်ဆက်ပေးသည်ဟာအခမဲ့တမန်ဖြစ်၏။ မိတ်ဆွေများနှင့် Viber ကိုတမန်နှင့်အတူမိသားစုမှစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ပါ။ အေးမြစတစ်ကာများနှင့်ရုပ်ပြောင် icon များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမျှဝေပါ။ အဆိုပါအခမဲ့ messenger ကိုသင်တို့ကိုလည်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေးနိုင်ပါတယ် - သင်တစ်ဦးအမြန်စကားသံကိုဖုန်းခေါ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ video chat နှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများမြင်ချင်သည်ဖြစ်စေ,
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစာအုပ်အနေဖြင့်တစ်ဦးအဆက်အသွယ် Choose သို့မဟုတ်ရိုးရိုး Viber ကိုအပေါ်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်သစ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် Viber ကိုပဲအခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျထက်အများကြီးပိုပြီးကမ်းလှမ်း! ပင်ဝေမျှမယ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ, အီမိုဂျီ icon များနှင့်အေးမြစတစ်ကာများကိုခံစား, စံချိန်အသံမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖိုင်များပေးပို့ပါ။
အထိ 200 လူတို့နှင့်အတူအုပ်စုချတ်!
တခါမှာကလူ 200 အထိအတူ - Viber ကိုတမန်နှင့်အတူကဖန်တီးအုပ်စုချတ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လွယ်ကူပဲ! , အုပ်စုတစ်စုချက်တင်ထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးကလူအပေါငျးတို့သ Get အလုပ်အုပ်စုများဖန်တီးအလွယ်တကူဖြစ်ရပ်များစည်းရုံး။ သင်တို့သည်လည်းမည်သည့်အသုံးပြုသူရဲ့အသံကိုသို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို '' နှင့်တူ '' လို့ရတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသူများအ Viber ကိုအခမဲ့ Messenger ကိုရွေးချယ်ရာတွင်နေကြသည်:
★လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့, ခရီးဝေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - Viber ကို Messenger ကိုသင့်ရဲ့အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှု app ကိုပါ! တစ်ဦးအသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ် login သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အလိုရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သက်ဝင်စေခြင်းမရှိပါ
★ Voice ကိုသို့မဟုတ်ဗီဒီယို - ယခုသင့်အခမဲ့ဖုန်းခေါ် Make! - အခြေခံအသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများအကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးမျက်နှာ-to-မျက်နှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ video chat နှင့်အတူလိုက်! သငျသညျပြည်တွင်းမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်စေရန်နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုများရှိမရှိ, ရှိသမျှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု HD ကိုအသံအရည်အသွေးဝါကြွား။
★ Secured ဆက်သွယ်ရေး - Viber ကို messenger ကိုအလိုအလျှောက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, ဗွီဒီယိုနဲ့အသံခေါ်ဆိုမှု, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်အုပ်စုချတ်စာဝှက်ပေးတယ်။
★အသိမှတ်ပြုအဆက်အသွယ် - ကိုယ်တိုင်သေချာသင်စကားပြောခံရဖို့ကိုဆိုလိုတာသူစကားပြောနေကြသည်စေရန်အဆက်အသွယ် authenticate ။
★ စတစ်ကာများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြ - အပျော်အပျက်ရုပ်ပြောင် icon များနှင့်အေးမြစတစ်ကာများပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုယူလာပါ။
★ "ထိခိုက်ပျက်စီးမှုထိန်းချုပ်မှု" နဲ့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတမန် - ကလှေတျတျောမူခဲ့သညျကိုတောင်အပြီးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်အသံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ပါ။
★ '' Hidden ချတ်များ '' အင်္ဂါရပ် - သင့်စာတိုပေးပို့ရေးမျက်နှာပြင်ကနေတိကျတဲ့ချတ်ဖုံးကွယ်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့အားဝင်ရောက်ဖို့ရွေးချယ်ပါ။
★ အပိုဆောင်း features တွေ! အသုံးပြုမှု Viber ကို Messenger ကို, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Viber ကိုဂိမ်းများကိုဆော့ကစားပြည်သူ့ချတ်များအတိုင်းလိုက်နာ, သင့်အဆက်အသွယ်များကိုမျှဝေလူတွေကသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများမြင်ကြပြီဆိုပါကထွက်ရှာ, တည်နေရာနဲ့ပိုပြီးဖွင့်ဖို့,
Viber ကို Messenger ကို: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 800M လူမျိုးကိုစိုးချိတ်ဆက်ခြင်း! စာသား,, မခေါ် chat နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သူမဆိုအတူမျှဝေ !.
•လျှို့ဝှက်ချက်မက်ဆေ့ခ်ျ - သူတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Self-ဖျက်ဆီးသူတို့ဒီတော့အပေါ် Set အချိန်ကန့်သတ်။
• Clear ကိုသမိုင်း chat - လျင်မြန်စွာတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုဖျက်!
•လက်ငင်းကိုဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျ - ပုတ်နှင့် 30-ဒုတိယဗီဒီယိုများနှင့်အတူယခုအချိန်တွင်ကိုဖမ်းယူဖို့ချက်ချင်းကိုဗီဒီယိုအိုင်ကွန်ကိုင်ထားပို့ပေးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
30 ကို MB
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 02, 2017
500,000,000 + downloads,
Viber ကိုမီဒီယာS.à rl
IMO messenger ကို app ကို ...
ဗီဒီယို App ကိုပြန်လည်သုံးသပ် WeChat
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ Make ...
အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို အခမဲ့ Messaging ကို
မေလ 31, 2018 မှာ 10: 55 နံနက်
အလွန်ကောင်းတဲ့ APK များ
နိုဝင်ဘာလ 19, 2017 မှာ 9: 21 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 21, 2017 မှာ 8: 10 နံနက်
ကိုယ့်သေးငယ်တဲ့ samsung bada တယ်လီဖုန်းပေါ် Viber dplownload ချင်
ဧပြီလ 8, 2017 မှာ 1: 29 ညနေ
ငါဘာလုပ်သင့်တယ် viba ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်
ဇွန်လ 14, 2016 မှာ 7: 53 ညနေ
dude ဒါအရူး Hacking ကို
မေလ 2, 2016 မှာ 7: 13 နံနက်
ငါ app ကို download လုပ်ပေမယ့်သူကဖွင့်ဖို့မတတျနိုငျ eSe .code နှင့်မျှမဒါမှားယွင်းတဲ့ထားခဲ့ပါတယ်မျှနှင့်ကုဒ်များနှင့်နောက်တဖန်ပြန်လည်စတင်ရန်ကြောင့်ပယ်ဖျက်ဖို့ငါအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုပြီး
ဧပြီလ 5, 2016 မှာ 12: 42 နံနက်
Viber ကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု.
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2017 မှာ 7: 26 နံနက်
အဘယျအကူအညီ Viber ငါ့ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေး
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2016 မှာ 12: 44 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2016 မှာ 12: 04 နံနက်
ကိုယ့် Viber ကို download လုပ်ပေမယ့်သူကကိုယ့်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးပြုပြီးအလုပ်မလုပ်ဘူးသောအရာကိုအလုပ်မဖြစ်ငါ့ကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2016 မှာ 4: 13 နံနက်
ဦး .. သေချာ input ကို ur .. အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်စတင်သည်နှင့်ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုထို app ကိုဒေါင်းလုဒ်ဟုဦးမှပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ .. ပြီးရင်ဒေါင်းဖိုင်ကိုဝင်နှင့် ur ဖုန်းပေါ်မှာ Viber ကို install ပြုလုပ်စေရုံက uninstall နှင့်နောက်တဖန် Download ပြုလုပ် ညာဘက်နံပါတ်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်တောင်းဆိုနေကြသည်ကကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ကျေးဇူးပြု. မမေးအလုပ်လုပ် doesnt လျှင်, .. app ကို အသုံးပြု. ပျော်မွေ့ ...
ဧပြီလ 4, 2016 မှာ 3: 11 နံနက်
ဧပြီလ 5, 2016 မှာ 12: 39 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2015 မှာ 10: 22 နံနက်
ငါ၏အ Fone 1g ဒါပေမယ့်အခု Viber wid ဒန်ပေါ့
ဗီဂျေး malawat says:
နိုဝင်ဘာလ 25, 2015 မှာ 10: 44 နံနက်
အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု Viber ။
နိုဝင်ဘာလ 25, 2015 မှာ 10: 41 နံနက်
ငါဒီ app ကိုကြိုက်တယ်။
Akram Khan က says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2016 မှာ 9: 47 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 7, 2015 မှာ 7: 29 ညနေ
Viber 3G ဖုန်းဈက "သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်နေ့ကြောင်း ocopied
အောက်တိုဘာလ 1, 2015 မှာ 1: 03 ညနေ
ငါက y မသိရပါဘူး, Viber ကို download လုပ်မရနိုငျ
GPS Map Ruler - အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းနှင့်...ရိယာ ...